विदेशबाटै माधव नेपाललाई दिए प्रधानमन्त्री ओलीले कडा जवाफ « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
विदेशबाटै माधव नेपाललाई दिए प्रधानमन्त्री ओलीले कडा जवाफ
काठमाडौं, १३ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३ औं अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै असोज ६ गते शनिबार न्यु योर्कतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ११ गते बिहीबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले सोही दिन यस विश्व संस्थाका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता समेत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ८ गते सोमबार ‘नेल्सन मन्डेला शान्ति शिखरबैठक’ को रूपमा उच्चस्तरीय पूर्ण बैठकलाई समेत सम्बोधन गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली तथा श्रीमती शाक्य सोही साँझ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा श्रीमती ट्रम्पले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी भएका थिए ।
शनिबार दुईपक्षीय औपचारिक भ्रमणका क्रममा न्यु योर्कबाट कोस्टा रिकाको सान होजेतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । प्रधामन्त्री ओलीले सान होजेमा कोस्टा रिकाका राष्ट्रपति कार्लोस अल्भाराडो क्वेसाडासँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। उनले सान होजेमै शान्ति विश्वविद्यालय (युनिभर्सिटी फर पिस) लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री असोज १७ गते बुधबार काठमाडौँका लागि प्रस्थान गर्ने छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका बेला यता बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले खेलेको खेल प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले चासो ब्यक्त गर्दै संसदमा गरेको भाषणप्रति ओलीले अमेरिकाबाटै जवाफ दिएका छन् ।
अमेरिकामा पत्रकारिता गर्दै आएका एबीसी सहकर्मी सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यू स्टार्ट अगेनमा गरेको लामो कुराकानी :
राष्ट्र संघको बैठकमा अन्य देशका राष्ट्रप्रमुखहरुको नेपालप्रतिको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?
नेपालमा अहिले परिवर्तन आएको छ । हामी संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा छौं । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । जनताले आफैंले बनाएको संविधान र त्यस अनुसारका संरचनाहरु निर्माण भइसकेर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण भइसकेर निर्वाचनबाट निर्वाचित लामो समयपछि स्थिर सरकार बनिसकेको अवस्था छ । संक्रमकाल टुंगिएको यो पक्ष छ । हामी हिंसाका क्रमबाट पनि गुज्रियौं, त्यसको व्यवस्थापन भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रिया मूलतः सफल भएको छ ।
तपाई प्रधानमन्त्री भएको छ महिना बितिसकेको छ, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यति धेरै उत्साह थियो कि विदेशमा रहेका धेरै पार्टीका नेपाली जनतामा धेरै नै आशा देखिन्थ्यो । तर, सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने जस्तो वितृष्णा पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो एउटा कृत्रिम परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको छ, जसको खासै अर्थपूर्ण केही पनि छैन । यस वीचमा सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार रोकिएको छ । सुशासनका पक्षमा थुप्रै कदमहरु चालिएका छन् । थुप्रै कानूनहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि बनेका छन् । तीन वर्षभित्र कानून तयार गरिसक्नुपर्ने, तर ६ महिना बाँकी रहँदासम्म कानून तयारीको कुनै कामै भैदिएको छैन । पहिले मेरो नेतृत्वको सरकारले जुन थालेको थियो, त्यो त्यहीँ छोडिया छ । त्यस्तो अवस्थामा यी सबै कानूनहरु, मौलिक हकको सम्बन्धमा तयार गर्नुपर्‍यो । नयाँ संविधान अनुसार अरु कानूनहरु निर्माण, संशोधन गर्नुपरो ।
मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनको सम्बन्धमा गत वर्ष बनेको थियो, त्यसमा बनाउनेहरुले नै अहिले बखेडा निकाल्या छन् । जसले पहिले बनाए, उनीहरु नै विरोधमा उफ्रेका छन् । अहिले एक वर्ष पछि आएर यो सरकार तानाशाही भयो भन्दै उफ्रिएका छन् । यो सरकारले अलोकतान्त्रिक कानून बनायो भनेर उफ्रेका छन् । आज विरोधका स्वरहरु आयोजना गर्ने पनि उनीहरु नै हुन् । त्यसलाई उचाल्ने पनि उनीहरु नै हुन् ।
केही मान्छेहरुमा अलिकति कुण्ठा देखिन्छ । त्यो कुण्ठा पोख्नका लागि विभिन्न प्रकारका कुराहरु गरेका छन् । अहिलेको यो सरकारले बजेट बनाउँदा नबनाउँदा वषयाम सुरु भइसक्यो । सरकार गठन गर्दा नगर्दा यसैवीचमा देशभरिका बाटा बनाइसक्न त सम्भव थिएन । तर, यसवीचमा तीन दिनमा एउटाका दरले तुइनहरु विस्थापित भएका छन् । झोलुंगे पुलहरु बनेका छन् , बाटाहरु बनेका छन् ।
केही वर्ष लाथ्ग्यो मेलम्चीबाट खानेपानी ल्याउन, त्यो दु्त गतिमा काम भइरहेको छ र एक डेढ महिनाभित्र हामी काठमाडौंमा ल्याउँदैछौं । काठमाडौंको पानी सप्लाइको, ढलको अवस्था के छ, मैले भनिरहनुपर्दैन । सबै थोत्रा पाइपहरु छन् । त्यहाँ पानी छोड्नेवित्तिकै फेरि एउटा तहल्का हुन्छ । पानी नल्याई भएको छैन । तर, फेरि एउटा तहल्का हुन्छ र फेरि हामीले ती पाइपहिरु विस्थापित गर्ने र नयाँ बनाउने काम गर्नुपर्छ र बाटाहरु भत्किन्छन्, फेरि बनाउनुपर्ने हुन्छ । बाटाहरु छन् नै कहाँ काठमाडौंमा भनेजस्तो स्थिति छ । त्यसलाई मैले भनेको छु ६ महिनाभित्र म यो सबै व्यवस्थापन गरिसक्छु । दुई वर्षभित्र बाटाहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याइसक्छु र काठमाडौं ढलको हिसाबले, पानीको हिसाबले, बिजुलीको हिसाबले, टेलिफोनको हिसावले, यी सबै हिसाबले व्यवस्थित र राम्रा बाटाहरु भएको शहर दुई वर्षभित्र बनाउँछु ।केही पनि गरेन भनेर उफ्रिनेहरु, भनेजस्तो भएन भनेर उफ्रिनेहरु यो तपाईले भनेजस्तो सामाजिक सञ्जालमा फिँजाइएको एउटा हल्ला हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, लामा कामहरु ६ महिनामै त सम्भव छैनन्, त्यसैले एउटा सपना देखाउने, भविश्यको मार्ग देखाउने हो । तर, जनतामा के हुँदोरहेछ भने दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्दा, पप्पु कस्न्स्ट्रक्सन जस्ता स–साना व्यक्ति–व्यक्तिका कुरा जोड्दाखेरि जनताले सिधै तपाईसँग नाम जोड्ने र साना विवादमा यो दुई तिहाईको सरकार किन फस्ने ? जनताको दीर्घकालीन काम गर्ने लाग्ने, साना साना विवादमा फस्ने खालका काम नगर्दा हुन्थेन ?
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पुल हाम्रो समयमा बनेका होइनन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई काम हामीले दिएको होइन । भत्किएका पुल, नबनेका पुल, भाँच्चिएका पुल, कच्ची पुल, जे भएका हाम्रो समयमा होइन । ती पहिले त्यस प्रकारकाले केके लिने दिने भए, पहिलेकाले जानुन् । केके कारणले एउटा पनि राम्रो काम भएन, त्यो पहिलेका सरकारले जान्ने कुरा हो । तर, अहिलेको सरकारले तत सम्बन्धमा छानविन गरेको छ । खोजीनिती गरेको छ र छानविनबाट त्रुटीपूर्ण, अपराधपूर्ण देखिएका ठाउँमा कारवाही गर्छ ।
अब जहाँसम्म केही मान्छेहरुको नियुक्ति छ, ती मान्छेहरु अदालत गएर फिर्ता भएर आएका छन् । अदालत गएर सबै फिर्ता भएर आए । कसैले चाहिँ एकजनाले भन्यो, म अदालत गएर सरकारसँग झमेला गरेर जागिर खान्न । त्यसकारणले मात्रै ऊ आएन । अथवा अदालत गइसकेर पनि उसले फिर्ता लियो । हुन त अदालत जानेवित्तिकै म पुनस्थापन भैहाल्छु, तर मैले यो झैझगडाको बाटो छाडिदिएँ भन्यो । अदालत गएपछि त पुनस्थापना भइहाल्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा एउटामात्रै मान्छेले सरकारसँग मुद्दा लडेन भनेर उसलाई चाहिँ बाहिर राख्नुपर्ने रु उसलाई क्षमता ठिकै छ, अदालतबाट आउनुपर्ने आएन भने पनि उसलाई अहिले दिँदाखेरि न्यायोचित नै हुन्छ, किनभने भ्रष्टाचार पहिले गरेको छ कि छैन, भ्रष्टाचारको आरोप होला । कतै दोषी प्रमाणित भएको थाहा छैन । भ्रष्टाचार अहिले गर्न दिइँदैन । अहिले कुनै लेनदेनको कारोबार हुँदैन । कुनै कमिसनतन्त्र चल्दैन । यसो भएर अदालत नगएवापत कोही बाहिर बस्नुपर्ने जस्तो कुरा हुँदैन भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यसलाई मानिएको हो ।
तपाई विसं. २०१५ साल पछि दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुुहन्छ । जनताले लामो समयदेखि यो चाहेका थिए, बल्ल पाएका छन् । तर, दुई तिहाईको सरकार बनेको सुरुवातमै घेराबन्दीमा परेको जस्तो लाग्छ ? यो घेराबन्दी भित्रबाट छ या कसले गरिराखेको होला ?
मलाई त्यस्तो घेराबन्दीजस्तो लाग्दैन । केही कुण्ठा, केही त्यस्ता कुराहरु अभिव्यक्त भएका होलान्, पोखिएका होलान् । ती हाम्रोजस्तो कलिलो लोकतन्त्रमा राम्रो र नराम्रो, राम्रा काम र नराम्रा काम, राम्रा अभिव्यत्ति, र नराम्रो अभिव्यक्ति, देश र जनताप्रति समर्पित र आफूप्रति केन्द्रित अभिव्यक्ति छुट्याउन जनतालाई पनि समय लाग्छ । त्यस्ता स्थितिको फाइदा लिएर कसैले हुन सक्छ, केही भनेको होला । यो त राम्रै कुरा हो ।
तपाई पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । तपाईले पार्टी र सरकारको रक्षाका लागि कार्यकर्ताहरुलाई अरिंगालजस्तो बन्नुपर्‍यो पनि भन्नुभयो । तर, तपाई अमेरिका आइसकेपछि माधव नेपाल र अन्य नेताहरुले पनि सरकार र पार्टीको कामप्रति निक्कै ठूलो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ , तपाईले रक्षा गर्न भन्नुभएको थियो, उल्टै विरोध भैरहेको छ ?
यस स्थितिका साथ अगाडि जाँदैछ र र, अहिले साउन र भदौमा बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको हो । अब साउन र भदौमा बजेट निकासा हुन पाएको छैन । पानी परेको छ, पहिरो गएको छ, बाटो बन्न पाएको छैन । त्यसैबेला भारतसँगका थुप्रै सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्नेदेखि लिएर चीनसँग पारवहन यातायात सन्धीको प्रोटोकल तयार हुनेदेखि लिएर यी सप्पै काम भएका छन् । र, नयाँ उत्साहका साथ देश अगाडि बढिराखेको छ । अब यसमा म नहुनेवित्तिकै अब कसैलाई अलिकति शुन्यता भो, छटपटी भो, लौन कसरी बर्बाद हुन लाग्यो भन्ने परेको भने‘।
मैले पेल्नुपर्ने किन छ ? म पार्टी अध्यक्ष भैसक्या छु, म प्रधानमन्त्री भैसकेको छु । मलाई अरु केही चाहिएको छैन । मलानई पैसा कमाउनु छैन । धन कमाउनु छैन । केही गर्नु छैन । यस्तो अवस्थामा मैले कसैलाई पेल्नुपर्ने होइन ।
हामी विदेशमा बसेर प्रत्येक दिनका समाचार हेर्दा दुःख लाग्छ, बलात्कारका घटनाहरु‘ तपाई यता (अमेरिका) आइसकेपछि दुई जना किशोरीले बलात्कार र एसिड आक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् । तपाईलाई के लाग्छ, यसमा राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो, अथवा राज्य कमजोर भएको हो ?
अर्थात् १२ वर्ष त पत्ता लागेको थिएन नि त । कहिले कहिले १२ वर्ष पनि पत्ता लाग्दोरहेन छ अपराध । अपराध पत्ता लाग्न समय लाग्न पनि सक्छ । तर, के सरकार अपराध ढाक्न लागेको छ ? के अपराधी जोगाउन लागेको छ रु त्यस्तो लागेको छैन । कोही यस्तो हुन सक्दछ, कुनै पनि संगठनमा, संस्थामा, राज्यमा, निकायमा शत प्रतिसत मान्छे ठीकै छ भन्न सकिन्न होला । त्यस्तो मान्छेहरुको पनि घुसपैठ हुन सक्छ । तर, राज्यको तर्फबाट त्यस्तो भइराखेको हैन र राज्य त्यस कुरामा गम्भीर छ ।
यो सँगसँगै सामाजिक जागरणका लागि, समाजको नैतिक उत्थानका लागि ध्यान दिनुपर्दैन रु सामाजिक सञ्जालका नाउँमा, यस्ता साइटहरु मार्फत अत्यन्त घीनलाग्दा अपराधहरु फैलाउने ।
कञ्चनपुरको घटनालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
जहाँसम्म घटनाको कुरा हो, घटना अत्यन्त दुःख हो । चिन्ताजनक यसकारण छ कि यति नैतिक मूल्यमा नेपालजस्तो देश, नेपाली हुँ भन्नेहरु यति तल गिर्नु भनेको दुःख कुरा हो । यसलाई उठाउनुपर्छ । अब सरकार एकदम ठ्याक्कै सफल भयो भन्न त म भन्दिनँ । किनभने सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । कोशिस गरिराखेको छ । तर, कहिले कहिले यस्ता घटनाहरु पत्ता लगाउन अलि समय लाग्छ । त्यसलाई विषय बनाएर यही सरकारले नै यो अपराध गराएको हो जस्तो गर्न खोज्ने भनेको त विषयविहीनताको, विषयको दरिद्रताको र संस्कार दरिद्रताको स्थिति हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यु कञ्चनपुरलगायतका हिंसाका घटनाहरु भइरहँदाखेरि सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?
हैन, केही मान्छेहरु सबै काम छाडेर यसैमा लागेका छन् । जसरी पनि विरोध गर्ने । तिनको सम्बन्धमा त मलाई केही टिप्णी गर्नु छैन । तपाईले हेर्नु भयो भने ‘यो सरकारले के गर्दैछ, हत्या हिंसा बलात्कार गर्दैछ‘’ के यस्तै हो र ? क यो सरकारले हत्या हिंसा र बलात्कार गरिाखेको छ ? यस्ता बकबास गर्ने बकबासीहरुका सम्बन्धमा त हामीले केही कमेन्ट गर्नु छैन ।
दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जे पनि हुन्छ भन्ने आशा छ क्या जनतामा
त्यो विस्तारै हुन्छ । विस्तारै के हुन्छ भने हामी राज्य संयन्त्रलाई सबल बनाउँछौं । सामाजिक नैतिकताको धरातल जुन खस्किँदो छ, त्यसलाई माथि उठाउँछौं । राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक उचाइ र स्तर यति तल खसेको छ, त्यसलाई उठाउनुपर्ने छ । जे पनि बोकेर हिँड्ने । राजनीतिक पार्टीहरुका राजनीतिक एजेण्डा छैनन् । कुनै विषय छैनन् । राष्ट्र निर्माणका कुनै विषय छैनन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्केतिक कुनै विषय छैनन् । अनि के भेटिन्छ भन्दाखेरि मुसाले चामलको बोरामा प्वाल पार्‍यो अरे भन्ने सुन्यो भने ल यस्तो सरकार मुसाले चामलको बोरामा प्वाल पारुञ्जेल के हेरेर बस्यो ? नालायक सरकार भनेर कराउने । यो खालको राजनीतिक संस्कृति जुन छ, यो एकछिनका लागि हो । दयालाग्दो संस्कृति हो यो । यसलाई संस्कृतिका रुपमा जो उठाउन खोजेका छन्, केही अर्थ छैन यसको ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस कमजोर छ, ऊ आफैंभित्र लडिराखेको छ । यस्तो कमजोर प्रतिपक्षलाई तपाई किन आक्रमण गरिरहनुहुन्छ पटक–पटक ? तपाईले भाषणहरुबाट प्रतिपक्षलाई पोलिरहेको देखिन्छ ।
प्रतिपक्षतिर कहाँ फर्किनु ? प्रतिपक्षलाई त मैले न केही भनेको छु, न केही गरेको छु । न त उहाँहरुको जस्तो नक्कली मुद्दा लगाउने, थुन्ने, गिरफ्तार गर्ने, त्यस्तो केही होइन । उहाँहरु त बुरुक–बुरुक उफ्रिने, मुख छाड्ने गाली गर्ने, भाषण गर्ने, ती सप्पै गरिराख्नुभएको छ । हामी सुनिराखेका छौं । केही भनेको पनि छैन, केही गरेको पनि छैन । प्रतिपक्षतिर के फर्किनुथियो र रु प्रतिपक्षतिर नहेर्ने होइन, उहाँहरुलाई सम्मानजनक ढंगले हेरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यु, विदेशमा बस्ने नेपालीहरु देशलाई असाध्यै माया गर्छौं, तर नेपालाई टुक्र्याउनुपर्छ भनिरहेकाहरुलाई तपाई किन कारवाही गर्नुहुन्न ? कसले रोकेको छ तपाईँलाई ?
देशमा हिंसा मच्चाउनुपर्छ भन्ने कुरा, देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा खुलेआम गर्दै हिँड्ने तत्वहरु छन् । यसमा म अलिक राम्ररी नै हेर्दैछु, मसिनो गरी । यसका पछाडि क–कसको हात छ, के के छ । तर, जे होस्, सिधै दुश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई कुनै कानूनी कारवाही गर्न, गिरफ्तार गर्न पनि पाइँदैन, थुन्न पनि पाइँदैन ।
उनिहरुलाई कार्वाही गर्न अदालतले नै रोकिराखेको छ । छोडिराखेको छ । हिंंसा गर्छु भन्नेले अदालतको प्राङगणमा भन्छ, हामीसँग बन्दूक छ, हामीलाई थुन्न सक्दैन । यो सत्ता ढाल्छौं । आदि इत्यादि अदालतको प्राङगणमा भन्छ । तर, सरकारले समाउन सक्दैन, अदालतले के भन्छ भने छोड् भन्दाभन्दै समातेकोमा चेतावनी दिन्छौं सरकारलाई भन्छ ।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीज्यु , गैरआवासीय नागरिकताको विषयमा संसदमा अहिले के भइरहेको छ ?